ဇလပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
စလပ်ပန်းပင် (Tabernaemontana divaricata)
စလပ်ပန်းပင်သည် 'အဲ့ပေါ့ဆီနေစီအီး'(Apocynaceae) မျိုးရင်းနှင့် 'တာဗာနီမွန်တေးနာ'(Tabernaemontana) မျိုးစုတွင် ပါဝင်သည်။ 'အီဗာတေးမီးယား'(Ervatamia) ခေါ် မျိုးစုသည် ယခုအခါ 'တာဗာနီမွန်တေးနာ' မျိုးစု synonym ဖြစ်သည်။ စလပ်ပန်းပင် အမျိုးမျိုးရှိရာ အချို့မှာ အပင်ကြီး မျိုးဖြစ်၍ အချို့မှာ ချုံပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်မှာ ရွက်ဆိုင် ဖြစ်သည်။ပင်မမှ အခက်ထွက်သည့်နေရာတွင် ရွယ်စွယ် ပေါက် သည်။ အများအားဖြင့် အပွင့်ရောင်မှာ အဖြူရောင် ဖြစ်သည်။ အပွင့်သည် အကိုင်း၏ထိပ်ဖျားတွင် သီးခြားစီ ထွက်လာကြ သည်။ ပွင့်ချပ်အုံမှ ပွင့်ချပ်များသည် ပြန့်လျက်ရှိသည်။ ပွင့်ချပ် အုံ၏ ပြွန်သည် ထိပ်ချွန်သွယ် ဝတ်မှုန်အိမ်ပေါ်တွင် ဖောင်း လျက် တည်သည်။ အစေ့လောင်း အမြောက်အမြားပါရှိသည်။ အသီးမှာ တမြေ|ာင်းကွဲသီးတောင့် ဖြစ်၍ အများအားဖြင့် အစေ့ များစွာပါရှိသည်။
သိပ္ပံအမည်အားဖြင့် 'အီဗာတေးမီးယား ကိုရိုနေရီးယား'(Ervatamia coronaria; ယခုအခါတွင် Tabernaemontana divaricata)ဟု ခေါ်သော စလပ်ပန်းပင်သည် နှစ်ကိုင်းဖြာ အမြဲစိမ်းချုံပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အခေါက်အရောင်မှာ မွဲပြာရောင်ဖြစ်သည်။ အခေါက် ၌ လေပေါက်များစွာ ရှိသည်။ အရွက်သည် အမြေ|းကဲ့သို့ပါးပြီး ငှက်ပျောဖူးပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ အလျားသည် အနံထက် ပို၍ ရှည်၏။ ထိပ်ချွန်သွယ်၏။ ရွက်ပြား ၄ ခုမှ ၆ ခုအထိ ပါ၍ ရွက်ည|ာဖက်တွင် ကျဉ်းမြောင်းသွား၏။ ရွက်ည|ာ၏ ပမာဏ သည် ၁/၄ လက်မှ ၁/၂ လက်မထိ ရှိသည်။ ထိုစလပ်မျိုးသည် မေလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ပွင့်လေ့ရှိသည်။ ပွင့်ချပ်နှစ်ထပ်မက ရှိသည့် အပွင့်များကို တွေ့ရတတ်သည်။ ပန်းပွင့်၏ အရောင်မှာ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသည်။ပွင့်ချပ်အုံပြွန်မှာ ၁/၂ လက်မမှ ၁ လက်မ ထိ ရှည်သည်။ စလပ်ပန်းသည် ညအခါတွင် မွှေးကြိုင်သော ရနံ့ရှိ၏။ အသီးမှာ ကောက်နေ၍ အလျား ၁ လက်မမှ ၂ လက်မထိ ရှိသည်။ ထိုအသီးသည် တမြေ|ာင်း ကွဲသီးတောင့်မျိုး ဖြစ်၍ အကြောများထလျက် ရှိသည်။ သီးတောင့်၏ အတွင်း ပိုင်းမှာ နီသည်။ အစေ့ ၃ စေ့မှ ၆ စေ့ထိပါ ရှိသည်။
ထိုစလပ်ပင်မျိုးကို ဟိမဝန္တာအနိမ့်ပိုင်း တောများ၌၎င်း၊ ယမုနာမြစ်အရှေ့ဖက် ပေ ၂ဝဝဝ အမြင့်ထိရှိရာ ဒေသများ၌၎င်း တွေ့ရသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ရှိ အပူပိုင်းဒေသ များတွင် ဥယျာဉ်များ၌ အများအားဖြင့် တွေ့ရသည်။
မြန်မာအမည် စလပ်သိန်ဟုခေါ်သော စလပ်မျိုးကို သိပ္ပံ အမည်အားဖြင့် 'အီဗာတေးမီးယား ဆက်ကက်ပီတေးတား'(Ervatamia subcapitata; ယခုအခါတွင် Tabernaemontana bufalina) ဟု ခေါ်သည်။ ထိုစလပ်မျိုး၏ ပွင့်တံသည် ၁ လက်မမှ ၂ လက်မထိ ရှည်သည်။ ပွင့်ချပ်အုံပြွန်မှာ ၁/၃ လက်မမှ ၁/၂ လက်မ အထိ ရှည်သည်။ တမြေ|ာင်းကွဲသီးတောင့်တွင် အစေ့ ၁ စေ့ သို့မဟုတ် ၂ စေ့ ပါရှိသည်။ပဲခူးရိုးမတောင်၊ တနင်္သာရီ တိုင်းနှင့် အထက်မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် ပေါက်ရောက်သည်။ တောစလပ်ပန်းပင်ကို သိပ္ပံအမည်အားဖြင့် 'အီဗာတေးမီး ယား ရီကားဗား'(Ervatamia recurva; ယခုအခါတွင် Tabernaemontana divaricata)ဟု ခေါ်သည်။ ထိုပန်း၏ မညီညာသော ပွင့်ဖတ်များ အစွန်းတွင် အလွန်တိုပြီးနုသော အမွှေးများရှိသည်။ တစ်မြေ|ာင်းကွဲ သီးတောင့်မှာ အပြားကြီး၍ အလျား ၁ လက်မ ရှိသည်။ အစေ့များစွာ ပါရှိသည်။ ပဲခူးရိုးမတောင်၊ တနင်္သာရီ တိုင်းနှင့် စစ်တကောင်နယ်တို့တွင် တွေ့ရသည်။
မြန်မာအမည်ဖြင့် ဖော်မပြနိုင်သော အခြား စလပ်မျိုးများ လည်း ရှိသေးသည်။ သိပ္ပံအမည်အားဖြင့် 'တာဗာနီမွန်တားနား ကယ်လိစိနား'(Tabernaemontana calycina; ယခုအခါတွင် Tabernaemontana pauciflora)ခေါ် စလပ်မျိုးသည် တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ 'တာဗာနီမွန်တားနားရော့ စတြာတာ'(Tabernaemontana rostrata)ခေါ် စလပ် မျိုးသည် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းခြေတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ 'တာဗာနီမွန်တားနား ကရစ္စပါး'(Tabernaemontana crispa; ယခုအခါတွင် Tabernaemontana alternifolia)စလပ် မျိုးသည် ကပ္ပလီကျွန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်း၌ ပေါက်ရောက် သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၃)
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ Govaerts, R., Goyder, D. & Leeuwenberg, A. (2019). World Checklist of Apocynaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://wcsp.science.kew.org/ Retrieved 19 December 2019
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇလပ်&oldid=496721" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၃:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။